လူမှုမျှဝေခြင်းခလုတ်ကစားကွင်း | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 1, 2012 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 8, 2013 Douglas Karr
ဒီအကြောင်းအရာကိုမျှဝေနိုင်စွမ်းမရှိဘဲသင်၏အကြောင်းအရာသည်မည်မျှကောင်းသနည်း။ ငါအံ့သြလောက်အောင်ကောင်းတဲ့စာမျက်နှာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာမျှဝေဖို့ခလုတ်တွေမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်မလျော်ကန်ဘူးလို့ဖတ်တဲ့အခါငါအမြဲအံ့သြသွားတယ်။ ငါ share ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းစဉ်နှင့်ဖော်ပြချက်မပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တည်းဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်၎င်းကိုတွန်းအားပေးရန်အလွန်အလုပ်များလွန်းသည်။ ငါပဲအာမခံ ... အပိုဆောင်းစာဖတ်သူများဆုံးရှုံးခဲ့ရ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်မျှဝေခြင်းခလုတ်တိုင်းမရှိပါ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်မတို့ကိုအသင့်တော်ဆုံးပရိသတ်ကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးသူတို့ကိုငါအသုံးပြုဖို့သေချာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ မျှဝေခြင်းခလုတ်များ၏နောက်ကွယ်ရှိလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ကိုချိုးဖျက်သည့်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုဤတွင်ဒီမှာပါ။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်အကြံပေးအဖြစ် ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရှု!
လူမှုရေးမျှဝေခြင်းခလုတ်အားကစားကွင်း infographic အားဖြင့် ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ.
Tags: Facebook ကfacebook ခလုတ်မျှဝေသည်inshare ခလုတ်linkedinလိပ်စာခလုတ်redditreddit ခလုတ်လူမှုရေးခွဲဝေမှုတွစ်တာtwitter ခလုတ်